Toro-lalana sy fitsipika miditra amin'ny e-visa Indiana
Na dia afaka mandao an'i India amin'ny fomba fitsangatsanganana 4 hafa aza ianao. amin'ny rivotra, amin'ny sambo, amin'ny lamasinina na amin'ny bus, fomba fidirana 2 ihany manan-kery rehefa miditra amin'ny firenena e-Visa any India (India Visa Online) amin'ny rivotra sy ny sambo fitsangantsanganana.
Araka ny lalàna mifehy ny fifindra-monina Indiana ho an'ny e-Visa any India na Visa any Elektronika dia tsy maintsy miditra amin'ny alàlan'ny rivotra na sambo fitsangantsanganana any amin'ny seranana sy seranan-tsambo ianao raha mangataka Ilay e-Visa mpizahatany ho any India or Business e-Visa ho an'i India or E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India.
Raha manana e-Visa fidirana marobe ianao dia mahazo mandeha amin'ny seranam-piaramanidina isan-karazany na seranan-tsambo amin'ny fitsidihana manaraka.
Ny lisitr'ireo seranam-piaramanidina ara-dalàna sy seranan-tsambo ara-dalàna dia hohavaozina isam-bolana, koa araho maso ity lisitra ity amin'ity tranokala ity ary soraty izany. Araka ny fanapaha-kevitry ny Fahefana misahana ny fifindra-monina ao India dia havaozina ity lisitra ity ary hisy seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo marobe hanampy amin'ny volana ho avy.
Ireo manana visa elektronika tonga any India dia takiana amin'ny fidirana amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena 28 voatondro. Azonao atao anefa ny miala amin'ny iray amin'ireo Zotram-pifandraisan-davitra momba ny fifindra-monina (ICP) any India, izay mety amin'ny alàlan'ny rivotra, ranomasina, lalamby na làlana.
Ireto ambany ireto ny seranam-piaramanidina 28 voatondro sy seranana 5 ho an'ny e-Visa Indiana
Na ireto seranan-tsambo voatondro ireto:
Raha mpihazona e-Visa ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo iraisam-pirenena voalaza etsy ambony na seranan-tsambo. Raha mikasa ny ho tonga amin'ny hafa ianao seranan-tsambo ny fidirana dia takiana aminao ny fangatahana Visa tsy tapaka ao amin'ny masoivoho Indiana akaiky indrindra na ny Kaomisionan'ny High India.
Tsindrio eto raha hijery eto ny lisitra feno an'ny Fizahana ara-dalàna avy amin'ny seranana Airport, Seaport ary Immigration avela ho an'ny E-Visa Indiana (India Visa Online).
Tsindrio eto raha hianaranao Fepetra takiana amin'ny e-Visa Indiana.
Mangataka fangatahana India Visa 4-7 andro mialoha ny sidinao.
Fampiharana e-Visa Indiana
© copyright an'ny www.india-visa-online.org